सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेपछि अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले दिए यस्तो प्रतिकृया, ओली-प्रचण्डलाई के भने ? — Sanchar Kendra
यस्ताे थियाे विवाद !
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा रहेकाले त्यसको प्रभावमा गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको र त्यसबाट आफ्नो पुरानो दलको अस्तित्व मेटाउने काम भएको उनले आरोप लगाएका थिए । यसैबीच सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोग लामो समयदेखि अनिर्णित छ ।
आधिकारिकता दाबी गरेको एक महिना वितिसक्दा समेत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आयोगका आफ्नै नजीरहरुलाई समेत बेवास्ता गर्दै आयोग पदाधिकारीहरू विवाद निरुपणको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छैनन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (२) मा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले दलको आधिकारिकता सम्बन्धी दाबी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा ‘… दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्ने’ उल्लेख छ ।
‘हामी बोलेकाबोल्यै छौं, आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामा उठेको प्रश्नले हामीलाई गम्भीर बनायो भनिरहेका छौं,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल भन्छन्, ‘आयोगले सबैको आग्रह सुन्छ भन्ने विश्वास गरौं ।’
दलको विवाद निरुपणमा आयोगका नजीरहरु के छन् ?
निर्वाचन आयोगमा दल विवाद र आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय भएका विभिन्न नजीरहरू छन् । जुन नेकपा विवादसँग समेत मिल्दाजुल्दा छन् । ८ जेठ ०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि २ असार ०५९ मा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाएर देउवाले आफूलाई सभापति घोषणा गरे । विशेष महाधिवेशनमा १४७४ मध्ये ७७० महासमिति सदस्यको सहभागिता रहेको देउवा पक्षको दाबी थियो । त्यही दाबीसहित उनीहरू पार्टीको आधिकारिता र चुनाव चिह्न माग्दै निर्वाचन आयोग गए ।
निर्वाचन आयोगका तत्कालीन एक आयुक्तका अनुसार त्यसबेला देउवाले आफूलाई पार्टीको आधिकारिकता प्रदान गर्न निकै दबाव दिएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री भएको भन्ने हिसाबले अधिकारीहरूलाई ‘दबाव’ दिइएको उनको भनाइ छ ।
आयोगले २०५९ भदौमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दियो । आयोगले त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको दबावलाई बेवास्ता गरेर प्रचलित ऐन अनुसार निर्णय गरेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसपछि देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) नामको छुट्टै दल गठन गरे ।
आनन्दीदेवीलाई मान्यता, राजेन्द्र महतोलाई नयाँ दल
२०६३ सालमा भोजराज पोखरेल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए । नेपाल सद्भावना पार्टी विभाजित भयो । सुरुमा बद्री मण्डल र आनन्दीदेवी नेतृत्वको सद्भावना पार्टी एकीकरण भयो ।
फेरि आनन्दीदेवी नेतृत्वको पार्टीभित्र अर्को विवाद देखा पर्यो । आधिकारिताको दाबी गर्दै राजेन्द्र महतो निर्वाचन आयोग पुगे । तर, आयोगले केन्द्रीय सदस्यहरुको बहुमत कता छ भन्ने हेर्‍यो । नेपाल सद्भावना पार्टीको ५० केन्द्रीय सदस्यमध्ये २६ जनाले आनन्दीदेवीको पक्षमा हस्ताक्षर गरे । बहुमत हस्ताक्षर अनुसार २५ मंसिर २०६४ मा आयोगले आनन्दीदेवीको पक्षमा निर्णय गर्‍यो । राजेन्द्र महतोले नयाँ दल सद्भावना पार्टी (सपा) दर्ता गरे ।
फोरम विवाद गच्छदारले अर्कै दल खोले
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा मधेसी जनअधिकार फोरममा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संसदीय दलका नेता विजय गच्छदारबीच विवाद भयो । सरकारमा जानुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएका गच्छदारले फोरम विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गरे ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी तत्कालीन ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत चाहिन्थ्यो । गच्छदारले ५३ सदस्यीय संसदीय दलका २८ सांसद र १६ केन्द्रीय सदस्य लिएर फोरम लोकतान्त्रिक दर्ता गर्न आयोग गए । तर उपेन्द्र यादव पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि गच्छदार समूहसँग केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत नपुगेको भन्दै आयोगमा उजुरी दियो ।
यो पक्षको दाबी फोरमको केन्द्रीय कमिटी ४२ सदस्यीय भएको भन्ने थियो । जबकी गच्छदारले विभाजनअघि फोरमको केन्द्रीय समिति ३६ सदस्यीय भएको र आफूसँग भएको १६ जना नै ४० प्रतिशत पुगेको दाबी गरेका थिए ।
आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षको दाबीलाई मान्यता दियो । त्यसपछि गच्छदारले यादव पक्षका तीन केन्द्रीय सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर ४२ जनाको ४० प्रतिशत पुर्‍याए र नयाँ दल दर्ताको वैधानिकता पाए । पार्टी विभाजनका बेलामा गच्छदार समूहमा रहेका रामजनम चौधरी केन्द्रीय समितिका १९ जना परिचयपत्र सहित आयोगमा गएर नाम सनाखत गराएको बताउँछन् ।
पार्टी विवादले न्यायाधीशको ह’त्या
२०६९ जेठमा ललितपुरमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश रणबहादुर बमको ह’त्या भयो । अदालतले बमको हत्यामा संलग्न बाबु थापा भन्ने मेघबहादुर थापासहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । चुरे भावर पार्टीमा केशवप्रसाद मैनाली अध्यक्ष र बाबु थापा उपाध्यक्ष थिए । पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि मैनाली र थापाले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गरे ।
निर्वाचन आयोगले थापाको समूहलाई वैधानिकता दियो । त्यतिबेला थापाको समूहमा रहेका बद्रीप्रसाद न्यौपाने १४ संस्थापक मध्ये १२ जना आफूहरूसँग भएको बताउँछन् । त्यही आधारमा थापा पक्षले आधिकारिकता पाएपछि मैनालीको सभासद पद खोसिएको थियो ।
आयोगको निर्णयविरुद्ध मैनाली सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले मैनाली समूहको पक्षमा फैसला गर्याे । आफ्नोविरुद्धमा फैसला गरेकाले न्यायाधीश बमको हत्या गरेको थापाले बयानमा स्विकारेका छन् ।
अदालतको आदेशपछि राप्रपा संयुक्त दर्ता
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विवादमा २२ भदौ २०७४ मा राप्रपा विभाजित भयो । पशुपति शम्शेर जबराले राप्रपा (संयुक्त) दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिए ।
उनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत ६४ जना र संसदीय दलको ४० प्रतिशतभन्दा बढी २२ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
त्यसविरुद्ध कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा आयोगमा गयो । केन्द्रीय समितिका ५४ जना मात्रै जबराको पक्षमा रहेको थापा पक्षको दाबी थियो । तर आयोगले दल दर्ताको निवेदनसँगै जबरा पक्षले दिएको ६४ जना हस्ताक्षरलाई मान्यता दियो । आयोगको यो निर्णयविरुद्ध थापा पक्ष सर्वोच्च अदालत पनि गएको थियो । सर्वोच्चले राप्रपा (संयुक्त) दर्ता गर्नु भन्ने आदेश दिएपछि विवाद टुंगियो ।